Fanafihana mitam-piadiana – Golden Center Behoririka: voasambotra ireo jiolahy nandroba 340 tapitrisa Ar | NewsMada
Mpandraharaha tompon’ny tranombarotra Golden Center, etsy Behoririka, ity lasibatry ny fanafihana mitam-piadiana nataona andian-jiolahy, ny alin’ny 7 novambra teo, ity. Voaroba tamin’izany ny volabe mitentina 340 tapitrisa Ar tao anaty baoritra.
Efa voasambotry ny polisin’ny Sut Antananarivo ny dimy amin’ireo jiolahy tamin’ity raharaha ity. Voasambotra voalohany ny mpamily taxi iray nitondra ireo jiolahy niaraka tamin’ireo volabe mitentina 340 tapitrisa Ar, natao tanaty baoritra. Tratra ny 13 novambra teo ny lehilahy. Fantatra tamin’izany fa hita tao amin’ny “cameras de surveillance” ao amin’ny magazay ny laharan’ny fiarany ka nahafahana nisambotra azy. Rehefa natolotra ny fampanoavana ny lehilahy, naiditra vonjimaika am-ponja eny Antanimora.
Nitohy ny fikarohana
Nitohy ny fanadihadiana ka notsimponin’ny polisin’ny Sut tsikelikely ireo tompon’antoka taorian’izay. Nisy mihitsy ny fidinana hatrany Mahajanga, ny 28 novambra teo, ka nahatrarana ilay mpiambina ny magazay, isan’ireo jiolahy nanao ny asa ratsy. Ity farany izay sarona niaraka tamina vola 21,6 tapitrisa Ar izay nentiny nandositra. Nambaran’ny loharanom-baovao fa izy no nanoro ireo mpiray tsikombakomba aminy teto an-dRenivohitra.
Atidohan’ny fanafihana rehetra rahateo izy ary isan’ny tompon-kevitra tamin’ny fanafihana. Nidina avy hatrany tany amin’ny tranony ireo polisy, saingy tsy tratra tao izy fa ny vadiny no tao. Rehefa nanontanina ilay ramatoa, nilaza ho tsy nahalala izay misy ny lehilahy vadiny. Hita nandritra ny fisavana ny trano fonenan’izy ireo ihany koa ny basy poleta miisa roa niaraka tamin’ny bala miisa fito. Nosamborina, noho izany, ity ramatoa vadiny. Tao anatin’ny famotorana, fantatra fa tafiditra ao amin’ity raharaha ity ihany koa ny havany akaiky miisa roa. Nahatrarana vola 5 tapitrisa Ar ireto farany tamin’ny fisamborana azy ireo ny alatsinainy teo. Nohamafisin’ny loharanom-baovao fa tamin’io andro io ihany no nahatrarana ilay tompon’ny fiara nampiasain’ireo jiolahy nandritra ny fanafihana. Nahatrarana vola 11 tapitrisa Ar izy tamin’izany.
Raha tsiahivina, ny alakamisy faha-07 novambra teo, nanafika ilay mpandraharaha tompon’ny Golden Center Behoririka ireo andian-jiolahy miisa miisa. Nitondra basy telo sy sabatra efatra izy ireo. Fantatra fa nambanan’ireo jiolahy antsy ny lehilahy nandritra ny fandrobana azy. Mbola mitohy ny fanadihadiana ataon’ny mpitondra filaminana.